रोग र उपचार – Page3– MediaNP
रोग र उपचार
किन सेवन गर्ने त्रिफलाचुर्ण ? यस्ता छन् सेवन गर्नुको आश्चर्यजनक लाभहरु !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०११:५१0
त्रिफलाको शाब्दिक अर्थ तीन फलको मिश्रण हो । उक्त तीन फल मानवस्वस्थ्यको लागी अमृतीय गुणले भरिएको छ । तीन फलमा अमला, हर्रो र बहेडा पर्दछन् । यी तीनको बीजलाई निकालेर समान मात्रामा धुलो मिलाउदा त्रिफला
केटिहरु किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेपछि महिनावारी हुने गर्दछन् । यो एउटा एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, करिब १२ देखि १४ वर्षपछि किशोरीहरु महिनावारी हुन्छन् भने कोहिकोहि १० वर्षमा पनि हुनसक्दछन् । महिनावारी भएको बेला अंधिकाश महिलामा
हरियो वा सुकेको धनियाको प्रयोगले यस्ता लाभ मिल्नेछ !
धनियालाई प्रायसबैजसोले निकै मनपराएर खाने गर्दछन् । विशेषगरी हरियो धनिया अचार वा सब्जीमा प्रयोग गरिन्छ भने सुकेको धनियाँको गेडाको धुलो सब्जीमा मसलाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । हरियो र सुकेको दुवै धनियाँ मानव स्वस्थ्यको निकै
करेलाको जुस नै काफी , क्यान्सरदेखि यी ७ खतरनाक रोगबाट छुटकारा पाउनको लागि !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०११:३६0
करेला स्वादमा निकै तितो हुने कारण यसलाई अधिकाश मानिसहरुले खान रुचाउँदैनन् । वास्तवममा करेला जति तितो छ, त्यतिनै स्वस्थ्यको लागी गुणकारी छ । यसलाई तरकारी, अचारको साथमा जुस बनाएर पनि खान सकिन्छ । तरकारी, अचार
मुख वा श्वास गन्हाउने समस्याका कारण र उपचार विधि !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०११:३३0
मुखबाट दुर्गन्ध वा श्वास गन्हाउने समस्याबाट पछिल्लो समयमा धेरै मानिसहरु पिडित भएका छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको खानपानमा ध्यान नदिनु, मुखको सरसफाइमा कमी हुनु वा गिजामा खराबी हुनु हो । यस्तो भएमा ब्याक्टेरियाहरुले शरीरमा
किन भोजनमा प्रतिदिन हिंगको सेवन गर्ने ? यस्ता छन् ८ अपत्यारिला फाइदाहरु !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००९:१८0
धेरै अघि देखि प्रयोग हुदैं आएको हिंग एक गुणकारी औषधी हो । प्राय यसको सुगन्धलाई धेरैले मनपराउँछन्, यस्तो सुगन्धकारी हिंगको सेवनले विभिन्न किसिमका रोग निको पार्न निकै सघाएको छ । जसको विषयमा धेरैलाई जानकारी छैन्